Ọganihu Semalt na Mkpa Ọ Dị na SEO
Ọ bụla azụmahịa nwere ike iji SEO mpaghara ya uru. SEO na-aga n'ihu na-etolite kemgbe Google malitere ime ka "nchịkọta" ahụ dị na 2014. Ọ rụpụtara bụ na ndị ọchụnta ego malitere ịchọ SEO dịka atụmatụ maka azụmahịa ha n'agbanyeghị na ha ewereghị ya dịka ebe nchekwa dị n'ógbè ahụ. mgbasa ozi ahia ha. Ndị na-eji usoro ahụ ụzọ hụ nwelite dị ka ohere iji meekwu mgbalị ha.
Mkpebi ịchụso SEO dị n'ógbè ahụ bụ ihe kwere nghọta ka ọ na-aga n'ihu na-eto eto dị mkpa.
Otú ọ dị, ọ naghị akwụsị ebe a dị ka SEO mpaghara kwesịrị ịnọgide na-enwekwu mmetụta na Michael Brown, otu n'ime ndị ọkachamara na - ahụ maka Semalt , na - akọwa ihe kpatara ya:
Google hụrụ azụmahịa azụmahịa
Ndị ọrụ search engines Google nwere ntakịrị ihu ọma maka ụlọ ọrụ dị nta na ụlọ ọrụ - ipad cart cost. Ndị ụlọ ọrụ ahụ enwewo mmasị dị iche iche n'oge gara aga, na-esite n'akụkọ ihe mere eme nke ika, ma ọ bụ ikike ya. Otú ọ dị, Google nwekwara mmasị inye ndị mmadụ ihe ha chọrọ, nke bụ ya mere ha na-egosipụta ụfọdụ n'ime ụdị nta ndị ọzọ na-ewu ewu na ndị ọzọ.
Ihe ọzọ mere ha ga-eji mee nke a bụ iji mee ka ndị nwe ụlọ ahịa nwere ihe onwunwe dị nta, gbasaa ọzọ. E nwere ụfọdụ ngwá ọrụ n'efu ndị Google nyere dịka Webmaster, na Analytics, na ebumnuche nke inyere ha aka ịbawanye ntanetị ha.
Nsonaazụ ndị mmadụ n'otu n'otu
Google na-enwe mmasị ịkwalite ahụmahụ ndị ahịa site na ịhazi ọrụ ya. Enwere ike ịnwe njedebe ugbu a na nchịkọta ọchụchọ na-ahazi na nke a haziri ahazi, ma ya engines ọchụchọ nwere ike ịmepụta nsonaazụ ọchụchọ ndị dị iche na onye na-edegharị ajụjụ ahụ. Akụkọ ọchụchọ na ọnọdụ ebe a na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe nzaghachi na Google. Ndị mmadụ na-anọgide na-aghọwanye ọkaibe, nke ahụ bụ ihe mere Google ji ezube iwepụta ihe ndị ọzọ, nke gosiri na SEO ga - anọgide na - eto eto.
Nwelite nke ngwaọrụ mkpanaka na ngwaọrụ wearable
Ndị mmadụ na-eji ngwaọrụ mkpanaka chọọ ịntanetị na mgbe ị na-aga ugboro ugboro. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-aga n'ihu na-eto eto kwa afọ, na ụlọ ọrụ dijitalụ na-emepekwu ngwaọrụ ndị nwere ike iwepụ, ọnụọgụ ọchụchọ na-eme ka ọbawanye elu. Ihe ga-esi na ya pụta bụ na nyocha ndị dabeere na nsobe ga-abawanye uru na nchọpụta mpaghara ebe ị na-eji ebe ndị akọwapụta ọbara. Ngwaọrụ ndị a na-adịghị mma ga-ewetaghachi nsonaazụ ndị ziri ezi na ọnọdụ onye ọrụ.
Ịgba asọmpi na-arị elu
E nwere ọtụtụ nde saịtị ọhụrụ e mepụtara n'afọ ọ bụla. Mmetụta o nwere maka azụmahịa ndị dị ugbu a bụ na ọ na-eme ka asọmpi dị elu. Ya mere, ụfọdụ weebụsaịtị ndị nwere ogo dị elu na nchọta ọchụchọ nwere ike ịdalata. Ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịzọpụta ọrụ ha nwere ike ịchọrọ ịkwado obere niche ahịa iji nweta ihe ngosi dị mkpa ha chọrọ. Obodo ahịa SEO bụ ụzọ aga mgbe asọmpi nwere ike ịkwụsị ihe ịga nke ọma n'ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Mmalite site na mkpọsa SEO mpaghara
Ntụgharịrị ntinye nke ebe. Jide n'aka na o nwere ihe niile dị mkpa iji gbochie esemokwu site na isi abụọ.
ọdịnaya mpaghara na ụlọ mmekọrịta. Kwalite njikọ niile na biputere ọdịnaya nke dị mkpa nye ndị mmadụ.
Nyocha na njikwa. Gbaa ndị ahịa ume ka ha bipụtakwa nyocha dị mma na saịtị ahụ.
Ozugbo nke a zuru ezu, mmadụ kwesịrị ime ndokwa iji nwee usoro na-agbanwe agbanwe ma na-aga n'ihu, tinyere usoro nyocha iji hụ ma mgbalị ọ na-akwụ.